Ogaden News Agency (ONA) – Xabsiyo Qarsoodi Ah oo Itoobiya Kuyaala oo La’ogaaday.
Xabsiyo Qarsoodi Ah oo Itoobiya Kuyaala oo La’ogaaday.
Posted by Dulmane	/ April 9, 2018
Xog rasmi ah oo soo gaadhay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa in xukuumada wayaanuhu ay leedahay boqolaal xabsi oo qarsoodi ah, kuwaas oo aan kujirin xabsiyada layaqaano ee Itoobiya.
Sida xogta aan kuhelayno sir ay siyaasiyiin culculus oo xukuumada wayaanaha katirsan ugudbiyeen wakaaladaha wararka ayaa muujinaysa xabsiyo aad ubadan oo qarsoodi ah oo ciidamada wayaanuhu ay ku ciqaabaan dadka shacabka ah ee lagu bahdilo wadanka gumaysiga Itoobiya.
Xogtan lahelay ayaa cadaynaysa in saldhiga Booliis fadaralka ee xaafada Maxico ee magaalada Addis Ababa laga helay 45 qol oo dadka shacabka ah iyo kuwa siyaasiyiinta ahba lagu qariyo, kadib marka laga soo xado isteeshimada wadanka ama laga soo qabto meel aan cidu joogin.
Gurigan ay xabsiyada qarsoodiga ah kuyaalaan ayaa lasheegayaa in uu kakooban yahay 9 dabaq kuwaas oo loohaystay in lagu qabto howlo kale oo ciidanka Booliis Fadaraalku ay leeyihiin, hase yeeshee waxaa soobaxday in gurigaas lagu iqaabo dadka dulmanayaasha ah ee shacabka ah.
Xogta ayaa muujinaysa dadka faraha badan ee lawaayay raq iyo ruux toona in ay kujiraan xabsiyada qarsoodiga ah ee wadanka oo sida laxaqiijiyay kuyaala guud ahaan wadanka haba ugu badnaadaan Ogadenia, Oromia iyo dhulka Axmaarada e.
Sida aan lawada socono wadanka Ogadenia oo kaliya ayaa kumanaan qof oo shacab ah lawaayay kadib markay ciidamada bahalka ah ee gumaysigu qabteen, waxaana aad uhoosaysa rajada laga qabo in ay dadkaasu noolyihiin, waxaana jira dad badan oo mar horaba laga samray halka qaar kalana wali laraadinayo.
Hay’adaha xuquuqul insaanka sida Ogaden Human Right Warch ayaa dhowr jeer kahadlay dadka shacabka ah ee ciidanka gumaysigu intay qabtaan lawaayayo raq iyo ruux toona.